MEEL KU QORO: Waqtiga La Shaacinayo Isku-aadka Horyaalka Premier | Axadle
a two-speed vote between the regions and
MEEL KU QORO: Waqtiga La Shaacinayo Isku-aadka Horyaalka Premier
By axadle	 On Jun 10, 2021
Xumaddii horyaalka waddanka Ingiriiska ee xilli ciyaareedka dambe ayaa durba la dareemayaa toddobaadyo kaddib markii lasoo afjaray xilli ciyaareedkii hore ee 2020-21, waxaanay taageereyaashu sugayaan isku-aadka iyo taariikhaha muhiimka ah ee sannadka dambe.
Kylian Mbappe Oo Kala Wareegay Griezmann Masuuliyadda Kubbadaha Laadka
How technology shapes the future of football
Horyaalka oo xilli ciyaareedkii dhamaaday ay hantiday Manchester City kaddib 15 ciyaarood oo xidhiidh ah oo ay guuleysatay laga soo bilaabo bishii December, taas oo keentay inay jidka kusii jiidho Liverpool oo iyaduna waqtigaas bilowday inay hoos usoo gurato, hoggaankeedana lumiso.
Iyadoo uu socdo tartanka Euro oo kulamadiisa ugu horreeya ay waddamadu ku kala-calaf qaadeen, laakiin aanay wali soo bixin waddamada ku hadhaya wareegga koowaad ayaa waxa soo bixi doona isku-aadka horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka dambe.
Xilli-ciyaareedkan ayaa waxa si weyn isha loogu hayaa Chelsea oo wacdaro dhigtay tan iyo markii uu yimid Thomas Tuchel, Manchester United oo labaad ku dhamaysatay saxeexyo ay isku xoojinaysana samaynaysa iyo Liverpool oo dib u helaysa ciyaartoydii dhaawacoodu sababay inay kaalinta saddexaad si dirqi ah ugu soo dagaallanto.
Saddexda kooxood ee Norwich City, Watford iyo Brentford ayaa kusoo biiraya horyaalka Premier League xilli ciyaareedka dambe, iyagoo beddelaya saddexda kooxood ee tartanka ka baxay, heerka labaadna u degay ee Sheffield United, West Bromwich Albion iyo Fulham.
Kooxaha horyaalka Premier League ku dagaallami doona xilli-ciyaareedka 2021-22:
Goorma ayuu soo baxayaa isku-aadka xilli ciyaareedka 2021/22?
Isku-aadka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ee xilli-ciyaareedka 2021/22 ayaa lasoo saari doonaa maalinta Arbacada ee June 16,2021, waxaanay taageereyaashu sugi doonaan kaliya lix maalmood in ay ogaadaan sida uu noqonayo jadwalka kooxahooda ee xilli ciyaareedka.
Maamulka Premier League ayaa shaacin doona jadwalka marka ay saacaddu tahay 11am waqtiga Geeska Afrika, waxaanad kala socon doontaa xogta oo dhamaystiran halkan oo aanu idiinku soo gudbin doono kulamada ugu muhiimsan iyo ciyaaraha xaasaasiga ahaa ee xilli ciyaareedka dambe.
Goorma ayuu horyaalku bilaabmi doonaa?
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ee xilli ciyaareedka 2021/22 ayaa bilaabmi doona maalinta Sabtida ee August 14, 2021, taas oo qiyaas ahaantii ku beegan bil kaddib marka uu soo dhamaado tartanka qaramada Yurub ee Euro.
Gooarma ayuu dhamaan doonaa xilli-ciyaareedak 2021/22?
Horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka 2021/22 ayaa waxa uu dhamaan doonaa maalin Axad ah oo ay taariikhdu tahay May 22, 2022.
axadle 13207 posts
the postponement of Sierra Leone-Benin until 14 June
Emmanuel Macron announces “the end of the operation
Guddoomiyeyaal caawa lagu dilay Muqdisho iyo Beledweyne iyo…
DANAB oo Shabaab badan ku dishay weerar ka dhacay Sh/Dhexe…
TV station, team news, prediction
Four varieties circulate in Senegal…
Muxuu Toni Kroos U Sheegay Cristiano…
Schmetzer praises Sounders after the…